Lalao CJSOI 2016 : nahemotra ny fivoriana noho ny fitokonan’i Mayotte | NewsMada
Lalao CJSOI 2016 : nahemotra ny fivoriana noho ny fitokonan’i Mayotte
Mandalo olana ireo manampahaizana amin’ny kômision’ny tanora sy ny fanatanjahantena aty amin’ny ranomasimbe indianina (CJSOI), ankehitriny. Tsy afaka notanterahina mantsy ny fivorian’izy ireo.
Noho ny fisian’ny fitokonambe mitranga, any Mayotte, efa ho herinandro vitsy izay, nanambara ny sekretera jeneralin’ny CJSOI ilay Maorisianina, Nagalingum Pillay Samoo fa hahemotra amin’ny fotoana manaraka ny fivorian’ireo “experts”, izay tokony ho nanomboka omaly talata, handinihina ny lalao CJSOI, hatao eto Madagasikara ny 30 jolay – 8 aogositra, ho avy izao.
Taorian’izany, avy hatrany dia nandefasana taratasy fampahafantarana ity fanafoanana ny fivoriana ity avokoa ireo mpikambana rehetra. Ankoatra izay, nampahalalana ity tranga misy any Mayotte ity ihany koa ny filohan’ny CJSOI, ny minisitry ny fanatanjahantena malagasy Andriamosarisoa Jean-Anicet. Nanambara ity farany fa tokony afindra any amin’ny toeran-kafa ity fivoriana ity raha toa ka mbola mitohy ny fitokonana any an-toerana. Tsy ho mora nefa izany araka ny fanamarihany satria ilàna volabe.
Hatreto aloha, andrasana raha toa ka afaka hampiantrano ity fivoriana ity ihany ry zareo Mahore.
Tsy hisy “village des jeux”
Voalazan’ny talen’ny lalao, Ratovonirina Haja fa tsy hisy ny toerana hitobian’ireo delegasiona mifaninana na ny «village des jeux» amin’ity, fa hipetraka amin’ireo hotely kintana telo, eto Antananarivo izy ireo.
Taranja dimy no hiadiana volamena amin’ity dia ny atletisma lahy sy vavy, hatao ao amin’ny kianjan’Alarobia. Ny judo lahy sy vavy, hotontosaina ao amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina. Ny baolina kitra vehivavy, lalaovin’olona fito, horaisin’ny kianjaben’ny Mahamasiina. Ny handball lehilahy, hatao ao amin’ny lapan’ny fanatanjahantena ary ny tenisy ambony latabatra lahy sy vavy, ao amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano.
Ankoatra izay, hisy koa ny fihaonana ara-kolontsaina. Firenena enina no efa nilaza fa handray anjara dia i Madagasikara, Seychelles, Maorisy, La Réunion, Mayotte ary Kaomoro. Tsy mbola nanome valin-teny kosa i Djibouti.